Akụkọ - e -LinkCare gara nzukọ ọgbakọ mba ụwa nke 2017 ERS na Milan
ERS makwaara dị ka European Respiratory Society mere ọgbakọ mba ụwa nke 2017 na Milan, Italy na Septemba a.
Achọpụtara ERS dị ka otu nzukọ iku ume kacha ibu n'ụwa dịka ọ dịla anya ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ sayensị na Europe. N'ime ERS nke afọ a, enwere ọtụtụ isiokwu na -ekpo ọkụ ka a na -atụle dịka nlekọta oke iku ume na ọrịa ikuku.
e-LinkCare nwere obi ụtọ ya na ihe karịrị ndị sonyere 150 bịara ihe omume a site na 10th nke Septemba wee gosipụta teknụzụ e-LinkCare kachasị ọhụrụ site na igosipụta ngwaahịa nlekọta iku ume UBREATHTM ma nwee ihe ịga nke ọma dọta mmasị ọtụtụ ndị ọbịa.
UBREATH TM Spirometer Systems (PF280) & (PF680) na UBREATH TM Mesh Nebulizer (NS280) bụ ngwaahịa ọhụrụ ewepụtara ụwa na nke mbụ, ha abụọ nwetara nzaghachi dị ukwuu n'oge nnọkọ ngosi, ọtụtụ ndị ọbịa gosipụtara mmasị ha na gbanwere kọntaktị maka ohere azụmaahịa nwere ike.
N'ozuzu, ọ bụ emume na-aga nke ọma maka e-LinkCare bụ ndị raara onwe ha nye ịbụ onye isi ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ a. Enwere m olile anya ịhụ gị na ọgbakọ ọgbakọ mba ụwa nke 2018 na Paris.
Oge ezipụ: Mar-23-2021
Ngwa Nnwale Nnwale Ọbara Ọbara, Spirometer nke pneumotachograph, Companylọ ọrụ kacha mma na -enyocha shuga, Igwe Nnwale Ọbara Ọbara, 5.2 Ọbara shuga, Ọbara ọbara na -ebu ọnụ 100,